Manchester City oo Soo Baxday iyo Kooxaha Bayern Munich,Barcelona,Chelsea,Schalke,Ajax iyo Athletic Bilbao oo Guulo Gaaray “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena 3-0 uga badisay kooxda CSKA Moscow.
Kooxda Bayern Munich ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 18-aad ee ciyaarta gool rigoore ah u dhaliyay ciyaaryahan Thomas Mueller,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Sebastian Rode ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Ciyaaryahan Mario Goetze ayaa goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Kooxda Roma ayaa waxaa garoonkeeda Stadio Olimpico 2-0 uga badiyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Samir Nasri ayaa daqiiqadii 60-aad ee ciyaarta goolka koowaad u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Pablo Zabaleta ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka labaad ee guusha u dhaliyay kooxda Manchester City.
Kooxda Manchester City oo uu hogaamiyo macalin Manuel Pellegrini ayaa markii u horeysay taariikhda u soo baxday wareega labaad ee koobka Champions League-ga.
Kooxda Bayern Munich ayaa ku soo baxday kaalinta koowaad ee Group-ka E,waxana ay uruursatay 15-dhibcood,halka kooxda Manchester City ay ku baxday kaalinta labaad,iyadoo ku soo baxday sideed dhibcood.
Kooxda Roma ayaa ku soo baxday kaalinta sedaxaad ee Group-ka E,iyadoo ciyaari doonto koobka Europa League-ga.
Kooxda Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou 3-1 uga badisay kooxda Paris Saint Germain.
Kooxda Paris Saint Germain ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 15-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa daqiiqadii 19-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Barcelona.
Ciyaaryahan Messi ayaa dhaliyay goolkiisii 75-aad ee koobka Champions League-ga.
Ciyaaryahan Neymar ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Barcelona,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Barcelona.
Kooxda Barcelona aya ku soo baxday kaalinta kowaad ee Group-ka F,ka dib markii ay ka badisay kooxda Paris Saint Germain oo hogaamineysay Group-ka.
Kooxda Ajax ayaa garoonkeeda Amsterdam Arena 4-0 uga badisay kooxda APOEL Nicosia.
Ciyaaryahan Lasse Schoene ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka kowaad u dhaliyay kooxda Ajax,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Lasse Schoene ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Ajax.
Ciyaaryahan Davy Klaassen ayaa daqiiqadii 53-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Ajax.
Ciyaaryahan Arkadiusz Milik ayaa daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta goolka afaraad u dhaliyay kooxda Ajax.
Kooxda Barcelona ayaa ku soo baxday kaalinta koowaad ee Group-ka F,waxana ay uruursatay dhibco dhan 15-dhibcood,halka kooxda Paris Saint Germain ay ku soo baxday kaalinta labaad,iyadoo heshay 13-dhibcood.
Kooxda Ajax ayaa ku soo baxday kaalinta sedaxaad,waxana ay ciyaari doontaa koobka Europa League-ga.
Kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge 3-1 uga badisay kooxda Sporting Lisbon.
Kooxda Chelsea ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii sideedaad ee ciyaarta goolka rigoore ah u dhaliyay ciyaaryahan Cesc Fabregas.
Ciyaaryahan Andre Schuerrle ayaa daqiiqadii 16-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Chelsea,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Jonathan Cristian Silva ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Sporting Lisbon.
Ciyaaryahan John Obi Mikel ayaa daqiiqadii 56-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Chelsea.
Kooxda Maribor ayaa waxaa garoonkeeda Ljudski Vrt 0-1 uga badiyay kooxda Schalke 04.
Ciyaaryahan Max Meyer ayaa daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Schalke 04.
Kooxda Chelsea ayaa ku soo baxday kaalinta koowaad ee Group-ka G,waxana ay ku soo baxday dhibco dhan 14-dhibcood,halka kooxda Schalke 04 ay ku soo baxday kaalinta labaad,iyadoo heshay sideed dhibcood.
Kooxda Sporting Lisbon ayaa ku soo baxday kaalinta sedaxaad,waxana ay ciyaari doontaa koobka Europa League-ga.
Kooxda Athletic Bilbao ayaa garoonkeeda San Mamés Stadium 2-0 uga badisay kooxda BATE Borisov.
Ciyaaryahan Mikel San Jose aya bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka koowaad u dhaliyay kooxda Athletic Bilbao.
Ciyaaryahan Markel Susaeta Laskurain ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Athletic Bilbao.
Kooxda FC Porto ayaa garoonkeeda Estádio do Dragão barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Shakhtar Donetsk.
Ciyaaryahan Taras Stepanenko ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka u dhaliyay kooxda Shakhtar Donetsk.
Ciyaaryahan Vincent Aboubakar ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda FC Porto.
Kooxda FC Porto ayaa ku soo baxday kaalinta koowaad ee Group-ka H,waxana ay ku soo baxday dhibco dhan 14-dhibcood,halka kooxda Shakhtar Donetsk ay ku soo baxday kaalinta labaad,iyadoo heshay 9-dhibcood.
Kooxda Athletic Bilbao ayaa ku soo baxday kaalinta sedaxaad,waxana ay ciyaari doontaa koobka Europa League-ga.